केटीहरु संग कुराकानी
भेट्नुहोस्, मिति, प्रेम मा गिर!
000०००० भन्दा बढी प्रयोगकर्ता र क्याम केटीहरू टन
च्याट कोठा छेउछाउ
अर्को पुस्ता भिडियो च्याट। कुराकानी सकारात्मक भावनाहरू, फ्लर्टिir र आकर्षक केटीहरूले भरिएको छ। हामी यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्दैछौं, र हामी तपाईंलाई १ 18 बर्ष मुनिका कसैलाई अनुमति दिदैनौं, जबकि तपाईंलाई अपमानजनक सामग्रीबाट बचाउँछौं। यसका साथै, तपाईं अप्रिय प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको आफ्नै म्यूट र प्रतिबन्ध सूचीमा थप्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि धन्यबाद, हामी नयाँ प्लेटफार्ममा नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्नका लागि सहजै छौं।
अनुप्रयोगले वेबक्याम स्ट्रिमिंगलाई मात्र होइन युट्यूब र वीके भिडियोहरू पनि समर्थन गर्दछ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको एक मनपर्दो क्लिप फेला पार्नु हो जुन तपाईं मनपराउनुहुन्छ, र तपाईं यो एकैसाथ अरूसँग प्लट र पात्रहरू टिप्पणी गर्ने बखत हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पोल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको स्ट्रिम दर्शकहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।
अपरिचितहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्
यहाँ तपाईं सित्तैका लागि ती राम्रो पुरानो कन्सोल खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनी मील टाढा कसैसँग सह-अप खेल पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। दर्जनौं मानिसहरूले तपाईंको गेमप्ले प्रक्रिया हेर्छन् र टिप्पणी गर्दछन्। यो हामीले बनाउनु भएको सब भन्दा राम्रो भिडियो च्याट हो!
लवली स्टिकर र ईमोटिकन्स। हाम्रा प्रतिभाशाली कलाकारहरूले मनमोहक र प्रफुल्लितकारी स्टीकरहरूको भारी बनाउँदछन् किनकी कहिलेकाँही एकल समयमै स्टिकरले पाठको भित्ता भन्दा पनि बढी भन्न सक्दछन्। हाम्रा केही प्रयोगकर्ताहरू स्टिकरहरू मार्फत मात्र कुराकानी गर्छन्! केटीहरु संग फ्लर्टिंग यो कहिल्यै सजिलो र लापरवाह थिएन। तर पक्कै पनि सबै पुरानो-स्कूल इमोटिकॉन प्रयोगकर्ताहरूको लागि हामीसँग सबैभन्दा लोकप्रियहरू छनौट छ।
तपाईंको स्टुडियो र टिभी च्यानल। यदि तपाईं उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशलको साथ प्रतिभाशाली प्रबन्धक हुनुहुन्छ भने, तपाईं समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूको टोली बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको टिभी स्टुडियो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न, उनीहरूलाई कर्तव्य माना assign्कन गर्न र बजेट छनोट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको अनौंठो स्ट्रिमि style शैली शिल्प गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँको लोगो हजारौं प्रयोगकर्ताहरु द्वारा देख्नुहुनेछ। स्थिर रहनुहोस्, र तपाईंको स्टुडियो तपाईंको टिभी च्यानल तर्फ पहिलो कदम हुन सक्छ।
भोलि एक धारणा थियो कि कसैलाई टिभी च्यानल बनाउनको लागि पागल पैसा चाहिन्छ। समय परिवर्तन भएको छ, र अब तपाईं यसलाई नि: शुल्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सेवालाई निरन्तर सुधार गर्दैछौं, तर वर्तमान सुविधाहरू पर्याप्त छन्। साथै, हामी तपाईंलाई सुरूवात गर्ने दर्शकहरू र तपाईंको आफ्नै पैसा बनाउन सक्ने क्षमता प्रदान गर्दैछौं। तपाईं प्रयोगकर्ता सल्लाहहरूबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, श्रोताको आदेश पूरा गरेर, र पक्कै पनि तपाईं विज्ञापनबाट कमाउन सक्नुहुनेछ, च्याटमा विज्ञापन देखाउदै, वा YouTube मा रेकर्ड गरिएको शोहरू अपलोड गरेर।
नयाँ व्यक्तिलाई भेट्ने उत्तम तरिका! सामान्य टेक्स्टि this यस समयमा एकदम पुरानो हो, र यसले तपाईंलाई भिडियो च्याटबाट प्राप्त भएको आत्मीयता प्रदान गर्न सक्दैन। तपाईं अन्य शहरहरूबाट नयाँ केटीहरू भेट्नुहुनेछ, अन्य देशहरू भन्दा पहिले सजिलो! भेट्नुहोस्, समाचार छलफल गर्नुहोस्, र प्रभावहरू साझा गर्नुहोस्। चीजहरूलाई रमाईलो बनाउनको लागि, तपाईं र तपाईंले च्याट गरिरहनु भएको व्यक्तिको लागि उपलब्ध विकल्पहरूको चौड़ाई नबिर्सनुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाई भर्चुअल मितिमा जान सक्नुहुन्छ, र मैनबत्तीको साथ रोमान्टिक डिनर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको कल्पना संलग्न गर्नुहोस्, तपाईंको वेबक्याम, र शारीरिक दूरी गायब हुनेछ। आश्चर्यजनक!
अनलाइन कुराकानी गर्नुहोस्
पुरानो कुराकानी वास्तविकता शोहरू भिडियो प्रसारणहरू साइटहरूको लागि भिडियो च्याट अनलाइन भिडियोचट क्याम च्याट च्याट रूलेट